Mampientanentana ny firaisana ara-nofo atao eo ambony seza. Mipetraka eo amboniny ny lehilahy ary somary mitsangana, mihetsiketsika kosa ny vehivavy. Tombony amin’ity paozy ity ny ahafahan’ny lehilahy mamantatra tanteraka ny vatan’ilay olon-tiany, indrindra ny nonony.
Afaka manatsara tanteraka ny firaisana ara-nofo ny sisin-databatra. Malalaka be ny paozy azo tanterahina aminy : afaka mivalapatra, misabaka eo amboniny ohatra ny vehivavy, ka manofoka moramora ny filahiany kosa ny lehilahy. Mila mitandrina tsara anefa, sao marefo na hanindrona ny vatana ny zoron-databatra, indrindra raha ilay mitambesatra aminy iny ny vehivavy.
“Tapis moumoute” malefaka
Karazana “tapis” feno volombolony ary tena malefaka ny “tapis moumoute”. Hiavaka ny fahatsapana re amin’ny firaisana ara-nofo atao eo amboniny.
Ilay hatsiaka sy hafanana mitambatra no tena mahatsara ny firaisana ara-nofo atao eo ambony fanasam-bilia. Mipetraha eo ambony, asabakao ny tongotra hitsofohan’ny lehilahy. Sady manenjana tsara ny hozatry ny fitombenana rahateo ny hatsiaka.